सर्वश्रेष्ठ 24 लोटस टैटू डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु - टैटू कला विचार
सर्वश्रेष्ठ पुरुषहरु र महिलाहरुको लागि 24 लोटस टैटू डिजाइन आइडिया
sonitattoo अगस्ट 27, 2016
त्यहाँ विभिन्न प्रकारको टटू डिजाइनहरू छन् जुन कमल फूलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यस टैटूको सुन्दरताले धेरै मानिसहरुलाई यसको प्रशंसा गर्यो। यो आँखाहरू समात्न लागिएको छ। जब तपाईं मानिसहरू आफ्नो शरीरमा स्याही देख्नुहुन्छ त तपाईं कुरा गर्ने कुरा जान उत्सुक हुनुहुन्छ।
लोटस टैटू जटिल हुन सक्छ र उनीहरूको अर्थपूर्ण टैटू डिजाइनहरूले अद्भुत रूपमा अद्भुत बनाएका छन्। टटूको रंगले # लोटस टटूलाई विभिन्न अर्थ दिन्छ। मानसिक र आध्यात्मिकताबारे व्हाइट कमल वार्ता। यसले पूर्णता र शुद्धताको बारेमा पनि कुरा गर्छ।
त्यहाँ ट्यापको विभिन्न प्रकारहरू छन् जुन तपाईले हेर्नु भएको तरिका परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणका लागि लिनुहोस्, विभिन्न आकार र आकारमा पंखहरू। त्यहाँ शरीरको कुनै भाग छैन कि यो फिट छैन। प्वाँट टटको अर्थ के हो? धेरै मानिसहरू यसको लागि फरक अर्थ छन्। लोटस #tattoo प्रतीकात्मक छन् जुन मानिसहरू सजिलै संग उनको लागि जान्छन् विशेष गरी धार्मिक जसले यो प्यारा टैटू को अर्थ धेरै बुझ्दछन्। यो कोई माछा संग प्यार को लागि अर्को अद्भुत अर्थ बनाउन को लागि तैयार हुन सक्छ, सफलता, राम्रो भाग्य, बाधाओं को सामना गर्ने क्षमता र पनि खतराहरु।
बिजुली कलमको निर्माणको साथ, स्याहार लगाउन सकिंदै अतीत सरल छ जुन धेरै मानिसहरू यस कमल फूल ट्याटोसको लागि जान्छ। शिल्पकारहरू, जो एकपटक ठूलो अनुरोधमा थिए, ती ठोका छिमेकीहरूमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई ठिक पार्न सीमित हुन्थ्यो। मार्फत
कुनै पनि अवस्थामा, केहि समय पछि, शरीरको स्याहारको शिल्प फेरि संसारभरको सम्पूर्ण तरिकामा समृद्ध बनाइयो र यो रक्षा गर्न सकिन्छ कि आजकल,4को बाहिर 10 को तिनीहरूको शरीरमा केही प्रकारको मसी छ। मार्फत
कलाई फूल फूल टटू
यो शिल्पकारिताले यस्तो ठूलो स्तरमा प्रगति गरेको छ, यस तथ्यले गर्दा मानिसहरू आफैलाई स्थायी स्याङ्किङ्गमा सीमित नगर्दा असामान्य शरीरको कार्यशैली सिर्जना गरिएको थियो जुन वास्तवमा ती व्यक्तिहरू जसले सबै समयको लागि जाँच गर्न चाहँदैनन्। मार्फत
पछाडि लोटस फूल टटू
त्यस बिन्दुबाट अगाडि, यी मसीको प्रसिद्धि प्रभावशाली छ र यो बिना एक संदेह बिना एक लामो समय लाग्न सक्छ। मार्फत
आर्म लोटस फूल टटू
व्यक्तिहरूले विभिन्न कारणका लागि ट्याटोहरू पाउँछन्। त्यहाँ व्यक्तिहरू जुन छाप्नको लागि विस्तृत स्पष्ट टैटूहरूको लागि जान्छन् वा उनीहरूको पहिचान र शैलीहरू hotshot मा जानुहुन्छ। मार्फत
पैदल फूल टटू
त्यसोभए कि तपाईं व्यक्तिगत कारणहरूको लागि ट्याटूहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वा कसैको लागि मात्र अद्वितीय छ, त्यसपछि तपाइँलाई आफ्नो आवश्यकताको सेवा गर्न एक शंकास्पद स्थान पत्ता लगाउन आवश्यक छ। मार्फत
यो पनि जरूरी हुनेछ कि एक मौका छोरिएको छ कि मौका दिए छ कि तपाईं यो समय मा सामान्य आबादी देखि दूर राखन राख्नु पर्छ। मार्फत
पछाडि लोटस फूल फूल
सौभाग्य देखि, त्यस्ता ठूला संख्याहरू छन् जुन तपाइँले लाभदायक टैटू प्राप्त गर्न सम्भावना बनाउनुहुन्छ, तथापि यसलाई तपाइँलाई प्रलोभनमा लुकाउन राख्नुहोस्। मार्फत
क्यान्सर लोटस फूल टटू
यो सबैभन्दा प्रसिद्ध क्षेत्रहरू बीच एक स्ट्यान्डआउट हो र सानो टैटू र शब्दहरूको लागि एक अचम्मको स्थान बनाउँछ। तपाईं निस्सन्देह यो हात आभूषण वा हेर्न संग राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईं तैयार हुनुहुन्छ। मार्फत
यो टैटूमा न्यूनतम एन्कोइजिङ जोनहरूमा छ र तपाईँले यसको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईँले कठोरबाट सामरिक दूरी बनाए राख्नुको साथै टाट छुट्याउने एक साधारण समय छ। मार्फत
देवियों को लागि लवली लोटस फूल टैटू
यस प्रकारको टटू गर्नु भनेको तपाईले तपाईंलाई प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईले तपाईको शैलीमा फरक पार्ने आवश्यकता छ। त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले सधै आफ्नो टैटू डिजाइनको साथ अनौठो लाग्ने बाटोको बारे सोचिरहेका छन्। छवि स्रोत
Belly Lotus फूल टैटू
ब्याक लोटस फूल टटू
लेग कमल फूल टैटू
लोटस फूल टैटू पाउनुभन्दा पहिले के गर्नु पर्ने पहिलो कुरा के हो? तपाईलाई चाहिने टटूको प्रकार थाहा छ र तपाईलाई थाहा छ कि टटूको बारेमा कुरा गरिरहेको छ। छवि स्रोत
बैक कमल फूल टैटू
जब तपाईं त्यसो गरेपछि, तपाईलाई एक पेशेवर खोज्नु पर्छ जसले तपाईलाई त्यो कला फारम प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याइरहेको छ। छवि स्रोत
लवली कमल फूल टटू
टोटू कलाकार छनौट गर्दा त्यहाँ धेरै ठाउँहरू छन् जुन मद्दत पाउन सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटमा धेरै वेबसाइटहरू छन् जुन विभिन्न प्रकारको टैटूहरूसँग सम्बन्धित व्यवहारमा विशेष हुन्छन्। छवि स्रोत
महिलाहरु को लागि लोटस फूल टैटू
अद्भुत कमल फूल टैटू
जब तपाइँ यी वेबसाइटहरू मार्फत पढ्न सक्षम छन् र एक विशेष टैटूको बारेमा संवेदनशील प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ, यो तपाईंको कमल फूल टटू प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ। छवि स्रोत
सेतो कमल फूल टटू
क्यान्सर कमल फूल टटू
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् केटीहरूको लागि लोटस फूल टटू विचार
टैटू विचारहरूचन्द्र टोटोटोचेरी खिलौना टैटूफिर्ता ट्याटोहरूआँखा टटूएंकर टैटूहरूwatercolor टटूआस्तीन टैटूहरूअनन्तता टटूबिस्कुट टटूआदिवासी टैटूहरूगर्दन टैटूहरूरिप टैटूप्यारा टैटूहरूओटोपस ट्याटूपुरुषहरूको लागि टैटूक्राउन टैटूहरूहात्ती टटूटखने टैटूपैट टैटूप्यार टैटूज्यामितीय ट्याटुहरूबिल्ली ट्याटोmehndi डिजाइनकम्पास टैटूसिंह टटटोहरूसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूकमल फूल टटूFeather Tattooईगल ट्याटोछाती टैटूहरूहृदय टटटोट्याटुहरू केटीहरूको लागिहात टाटाटोसदूत टैटूसूर्य टैटूहरूतीर टटूबहिनी टैटूहरूतितली टैटूहरूपक्षी टैटूहरूगुलाब टैटूहरूयुगल टैटूहरूक्रस टैटूफूल टैटूहरूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूkoi fish tattooहीरे टैटूहात ट्याटोससंगीत टैटूहरूहेनना टैटू